Latest news — MYSTERY ZILLION
October 2008 edited November 2008 in Tech News
အသံနှင့်ရှာဖွေနိုင်သော Yahoo ရဲ့ One Search 2.0 application လာပြီ
Yahoo ဟာ ၎င်းရဲ့ပထမဆုံးသော voice-responsive search ဖြစ်တဲ့ one search 2.0 application ကို BlackBerryု ဖုန်းတွေ အတွက်ရော၊ Nokia Series 60 ဖုန်းတွေ၊ Series 40 ဖုန်းတွေအတွက် download လုပ်လို့ရအောင် တင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီ application ရဲ့ယခင်က version အဟောင်း ကိုသာ ရထားသူတွေကတော့ update လုပ်ဖို့အတွက် ပြန်လည် download လုပ်ရမှာပါ။ ဒီ onesearch service ဟာ Yahoo ရဲ့ database အဖြေတွေကို ခလုတ်နှိပ်ပြီး အသံထွက်လိုက်ရုံနဲ့ ရှာဖွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်ချက်တွေအရတော့ ဒီ voice-recognition နည်းပညာဟာ search လုပ်ရာမှာ ရှုပ်ထွေးနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ တချို့အသံထွက်တွေကို တုံ့ပြန်ရာမှာ Speech recognition software ဟာကောင်း ကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းပညာ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ voice search လုပ်တာဟာ ခလုတ်နှိပ် typing လုပ်ရတဲ့အချိန်တွေကို သက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခု အခါ One Search 2.0 ကို Nokia 60 ဖုန်းတွေနဲ့ဆိုရင် m.yahoo.com/ shortcut ကနေ ဖုန်းသို့မဟုတ်် PC တွေနဲ့ရှာနိုင်ပါ တယ်။ Yahoo Go 3.0 ရဲ့ new version ကိုတော့ get.go.yahoo .com့ က BlackBerry modelsက နဲ့ Nokia မော်ဒယ်လ်တချို့အတွက် PC သို့မဟုတ် ဖုန်းတွေရဲ့ native browser ကနေ ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးသောလိုင်စင်ဗားရှင်းဖြင့် Antivirus Software ဖြန်.မည်
အင်တာနက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနေသော ကွန်ပျူတာများတွင် Virus ၀င်ရောက်မှုအားထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန်နှင့်တားဆီးကာ ကွယ်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ License Version ဖြင့် Bitdefender Antivirus Software အားစတင်ဖြန့်ချိရောင်းချ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ вЂњ၂၁ရာစုမှာအိုင်တီလောက ကျယ်ပြန့်လာမှုနှင့်အတူမြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်ကွန်ရက်သုံးစွဲသူဦးရေဟာ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုများလာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာအင်တာနက်ချိတ်ဆက် အသုံးပြုတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေမှာ virus အန္တရာယ်ကနေထိထိရောက်ရောက် ကာကွယ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး License Version နဲ့ Bitdefender Antivirus Software ကိုစတင်ဖြန့်ချိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစတင်ဖြန့်ချိရောင်းချပေးတဲ့နေရာမှာ Bitdefender Antivirus Software ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်း(၃)ပိုင်း ဖြစ်တဲ့ Antivirus 2009 ,Internet Security 2009 နဲ့ Total Security 2009 ထဲကAntivirus 2009 ကိုစတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုအပိုင်း(၂)ခုကိုလည်းမကြာမီအချိန်အတွင်းမှာ ထပ်မံတင်သွင်းပြီးရောင်း ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်вЂќ ဟု Global Net မှတာ၀န်ရှိသူတစ်ဦးက အင်တာနက်ဂျာနယ်သို့ပြောသည်။ "License Version နှင့် Bitdefender Antivirus Software ကိုအောက် တိုဘာ၃၁ရက်နေ့မှာစတင်ဖြန်.ချီီရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ စတင်ဖြန့်ချိရောင်းချမဲ့အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့ကနေစပြီးနို၀င်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့အထိ ကိုအထူးစျေးနှုန်းဖြစ်တဲ့ ၁၇၉၀၀ ကျပ်နဲ့စတင်ဖြန့်ချိရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပြီး နို၀င်ဘာ ၁၄ ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာ ၁၉၉၀၀ ကျပ်နဲ့ရောင်းချ ပေးသွားမှာဖြစ် ်ပါတယ်вЂќ ဟု ၎င်းမှထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးသောမှအဆက် Software license Version အား သုံးစွဲခြင်းဖြင့်လိုင်စင်သက် ်တမ်းကာလအတွင်း Version အသစ်များထွက်ပေါ်လာပါက Free upgrade ပြုလုပ်နိုင်ပြီးအသုံးပြုရင်း လိုင်စင်သက်တမ်းကုန်သွားပါက သက်တမ်း တိုးမည်ဆိုလျှင်၂၀ရာခိုင်နှုန်းမှ၃၀ရာခိုင်နှုန်းအထိစျေးနှုန်း ထပ်မံလျှော့ချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ Virus နှင့် ပတ်သက်သောအခက်အခဲ များရှိပါက Bitdefender မှ Free 24/7 Technical Support ရှိပြီး Live Chat (သို့) e-mail ([email protected] bitdefender . com) နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက် သွယ် မေးမြန်းနိုင်ကြောင်းသိရ သည်။ Global Net Technology Co.,Ltd သို့လည်း Email ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေရုံးချိန်အတွင်း ဆက် ်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်းသိရသည်။ Bitdefender Antivirus Software အားRomanian နိုင်ငံမှ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်စတင်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီး License Version ထုတ်လုပ်မှုသက်တမ်းမှာ ၁၂နှစ် ကျော်ခန့်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ Bitdefender Antivirus Software (License Version) အား Corporate user အနေဖြင့်အသုံးပြုသောနိုင်ငံပေါင်း၁၀၀ကျော်ရှိပြီး Home User အနေဖြင့်သုံးစွဲသူဦးရေ ၄၁ သန်းကျော်ရှိကြောင်းသိရသည်။
source: Internet J
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်နှင့်ကွန်ပျူတာအသင်းများ၏ ၁၀ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ် သတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာပြပွဲ 10 th Anniversary ICT Exhibition (MCF, MCPA, MCIA, MCEA) ပြပွဲအတွင်းကုမ္ပဏီပေါင်း ၅၀ခန့်မှပြခန်းပေါင်းများစွာပါ၀င်ပြသ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာပြပွဲအား အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်မှစတင်၍နို၀င်ဘာ ၂ ရက်နေ့အထိ ၃ ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်သွား မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါပြပွဲတွင် ITကုမ္ပဏီ များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းကုမ္ပဏီများနှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်ကုမ္ပဏီများ ပါ၀င်ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။အဆို ပါပြပွဲတွင်၀င်ရောက်ပြသလိုသော ကုမ္ပဏီများအားပြခန်းများရောင်းချခြင်း လေလံပွဲကိုအောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ် သည်။ 10 th Anniversary ICT Exhibition (MCF, MCPA, MCIA, MCEA) ပြပွဲအထိမ်း အမှတ်အဖြစ် အိုင်တီနှင့်ပတ်သက်သော ပြိုင်ပွဲများကိုလည်း ကျင်းပ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပြီး၊ ၁၀ နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်ဟောပြောပွဲများကိုလည်းကျင်းပပေးသွား မည်ဖြစ်ကြောင်သိရှိရသည်။
iPod နဲ့ MP3 ကို တစ်နေ့တစ်နာရီ နားထောင်သူများ ငါးနှစ်ကြာ လျှင် နားပင်းနိုင်ခြေ ရှိနေ
သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ စမ်းသပ်ချက်အရ iPod နဲ့အခြားသော MP3 စက်တွေကို သုံးစွဲနားထောင် သူ၁၀ဦးမှာ ၁ဦးဟာ နားပင်းနိုင် ခြေရှိနေကြောင်း တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
EU ရဲ့သိပ္ပံကော်မ တီဟာဒီစမ်းသပ်ချက်ကို MP3 သုံးစွဲတဲ့လူတွေကိုအဓိက စမ်းသပ် ခဲ့ပြီး၊ ဆူညံသံများတဲ့စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေကိုပါ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်က လေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ငါးနှစ်ခန့်ကြာရင် နားထောင်သူ ၁၀ဦးမှာ ၁ဦးဟာနားပင်းနိုင်ခြေ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဥရောပမှာတော့ MP3 Player တွေကို အသံ ဆူညံမှုနှုန်း 100 decibels အထိ ပဲကန့်သတ်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အဆို အရ 89 decibels လောက်ကိုပဲ ပုံမှန်နားထောင်တဲ့သူတွေဟာ စက်ရုံတွေမှာ ကန့်သတ်ထားတဲ့အ သံဆူညံမှုနှုန်းထက် ပိုကျယ်နေသေးလို့ ထိခိုက်မှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတွင်းဗြိိတိန်ရဲ့ Royal National Institute for Deaf People့ အဖွဲ့ကလည်း don't loose the Music Campaign ကိုဖော်ဆောင်ကာ ဒက်စီဘယ်နည်းနိုင်သမျှနည်းနည်း နဲ့ MP3 တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့ လှုံ ဆော်နေပါတယ်။ ဆန်းစစ်သူတွေ ရဲ့တွက်ချက်မှုအရလည်း iPod ကို ၂၀၀၁ခုနှစ် ကတည်းက ထုတ်လုပ် ခဲ့တာမို့ အခုဆိုရင် ခုနှစ်နှစ်ရှိနေပြီး တစ်နေ့တစ်နာရီနှုန်းနဲ့ ငါးနှစ် လောက်ကြာအောင် နားထောင်ဖူးသူတွေ ရှိနေလောက်ပြီလို့ တွက်ပြခဲ့ပါတယ်။
မိုက္ကရိုဆော့ဖ်၏ဒုတိယအကြိမ်အခမဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့် များအပြင်စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများအတွက်အစီအစဉ်သစ် တစ်ခုအားထပ်မံတိုးချဲ့လိုက်ကြောင်းသိရှိ ရသည်။ မိုက္ကရိုဆော့ဖ်စာမေးပွဲ၀င်ရောက် ဖြေဆိုသူတိုင်းအတွက်ဒုတိယအကြိမ်အခမဲ့ပြန်လည် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိစေရန်စီစဉ်ပေးလျက်ရှိရာပထမအကြိမ် ဖြေဆို၍အောင်မြင်မှုမရရှိသူတိုင်းအား အခမဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုနိုင် ်ရန်သြဂုတ်လမှစတင်၀န်ဆောင် ်မှုပေးလျက်ရှိရာမှ ယခုအခါစာမေးပွဲကြေး ၂၅ရာခိုင်နှုန်း ထပ်မံလျှော့ချပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ вЂњဒုတိယအကြိမ်အခမဲ့ပြန်လည်ဖြေဆိုခွင့်ရရှိထားသူတစ်ဦးအတွက် ်စာမေးပွဲကိုတစ်ကြိမ်တည်း နဲ့အောင်မြင်ဖြေဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်ထပ်မံဖြေဆိုမဲ့နောက်ဆက်တွဲ တစ်ဘာသာစာမေးပွဲကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၇.၅ ဒေါ်လာနဲ့ဖြေဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်အတွက် ်ကိုမည်သူမဆို စာမေးပွဲအရေ အတွက်အကန့်အသတ်မရှိဖြေဆိုနိုင်သော်လည်း ပထမဖြေဆိုမဲ့စာမေးပွဲကိုဒီဇင်ဘာ(၃၁)ရက်မတိုင်မီဖြေဆိုရမှာဖြစ် ပါတယ်။ Discount ရရှိမဲ့စာမေးပွဲတွေကို၂၀၀၉ ဖေဖော်၀ါရီလကုန်အထိမိမိတို့ကြိုက်နှစ် သက်ရာ အချိန်ဖြေဆို နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်вЂќ ဟု အွန်လိုင်းစာဖြေဌာန တစ်ခုဖြစ်သော Myanmar Inspirations မှတာ၀န်ရှိသူတစ်ဦးကအင်တာနက်ဂျာနယ်သို့ ပြောသည်။ Discount ရရှိသောစာမေးပွဲ တစ်ခုအတွက်ဒုတိယ အကြိမ်အခမဲ့ပြန်လည် ဖြေဆိုနိုင်သောအခွင့်အရေးရရှိနိုင်မည်ဟုတ်ကြောင်းထပ်မံသိရှိရသည်။
သတင်းကောင်းတွေပါလားဗျို့.... အိုင်းအိုင်းလေး ဘယ်လိုကဘယ်လို သတင်းထောက်ဖြစ်သွားပါလိမ့်။ ဆက်ချဗျာ... ဆက်လုပ်.... အားပေးတယ်။
You can see this website .
ကြည့်ပေတော့ IT သတင်းတွေ....:)
တော်လိုက်ကြတာနော်။ နောက်လည်း ဒီထက်ရှာဖွေနိုင်ပါစေ။ အနော်တို့ ကြည့်ရတာပေါ့။
Nwe Ni Soe
Thanks for all of your news.
May u find many more news ... he heee ... :P
Just kidding bro. Thanks for your news.
ကျေးဇူးပဲ for all of everthing.:103:
မိုက္ကရိုဆော့ဖ်၏ Windows Azure ထွက်ရှိလာမည်
Microsoftသည် Windows အသစ်တစ်မျိုးဖြစ်သည့် Windows Azureကို ထုတ်ေ၀တော့မည်ဟုု သိရှိရသည်။ Microsoft၏ Software ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေးဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ ရေးအော့ဇီက အဆိုပါသတင်းကို လော့စ်အိန်ဂျလိစ်တွင် တရား၀င် ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ Versionသစ်သည် Programmerများအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ထားပြီး .Net Framework၊ SQL Server၊ Share Point၊ Dynamics CRMနှင့် Live Serviceများအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ထားကြောင်း အော့ဇီက ပြောကြားသွားသည်။ Azureသည် Server Version သဘောမျိုးဖြစ်ပြီး အခြား Microsoft Softwareများနှင့်လည်း အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် OSဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ Azureသည် Webဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် အထူးပြု ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Services Platform အနေနှင့် ရည်ရွယ်ထားသည့် Windows Azureကို (၂၀၀၉)တွင် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။ Cloud-Based နည်းပညာကို အခြေခံထားသော Windows Azureသည် Windows 7မတိုင်မီ ထွက်ရှိလာဖွယ်ရှိသည်။ Microsoftအနေနှင့် Windows Azureတွင် Vistaကဲ့သို့ လုံခြုံရေး အားနည်းမှုများ မပါရှိစေရန် ထပ်မံ စိစစ်ဦးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ဖြန့်ချိမည့်ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
မိုက္ကရိုဆော့ဖ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် data center တွေဆီကနေ မောင်းနှင်ရေးဆွဲပေးမယ့် Windows Azure အမည်ရှိ Windows တစ်ခုကို အင်တာနက်မှာ လွှင့်တင်လိုက်ပြီဖြစ် ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင် PC တွေပေါ်မှာပဲ run တဲ့ Operating System မျိုးနေရာမှာအစားထိုးဖို့ ဒီ Azure ကိုလွှင့် တင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ developer တွေကိုယ်တိုင် မိုက္ကရိုဆော့ဖ်ရဲ့ data center တွေအတွင်းမှာ program တွေ၀င်ရောက်ရေးသားခွင့် ရဖို့အတွက် ရည်ရွယ်လွှင့်တင်ခဲ့ တာလို့ဆိုပါတယ်။
““Windows Azure“ ဟာ ကျွန် တော်တို့ ဆော့ဖ်၀ဲရဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဗျူဟာပြောင်းလဲမှု လည်းဖြစ်ပါတယ်”” လို့ မိုက္ကရို ဆော့ဖ် ရဲ့ ဦးဆောင် ဆော့ဖ်၀ဲဗိသုကာအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင် ရေးအော့ဇီကဆိုပါတယ်။
၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ မိုက္ကရိုဆော့ဖ်က Live Services တွေနဲ့ပတ် သက်လို့ ပထမဆုံး ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ မိုက္ကရိုဆော့ဖ်က မကြာသေးမီက Live Mesh ကိုလွှင့်တင်ခဲ့ ပြီးဖြစ်ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ က Azure ကိစ္စကိုကြေညာခဲ့ရာ မှာတော့ မိုက္ကရိုဆော့ဖ်က သူ့ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ အင်တာနက်မဟာဗျူဟာတွေကို ဘယ်လိုပေါင်း စပ်ထားတယ်ဆိုတာကို ပထမဆုံး ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ၂၀၁၀ ဇန် န၀ါရီလလောက်မှာထွက်ရှိမယ့်Windows7နဲ့ပတ်သက်ပြီး အ သေးစိတ်အချက် တွေကို ထပ်မံ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
မိုက္ကရိုဆော့ဖ်ဟာ Azure ကို လွှင့်တင်ပြီးနောက် Amazon ၊ Salesforce.com နဲ့ Rackspace တို့လို ကွန်ပျူတာပိုင်းဆိုင်ရာ၀န် ဆောင်မှုနဲ့ အင်တာနက် Storage ၀န်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ပြိုင်ဆိုင် ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ အကဲခတ် တွေက သုံးသပ်ပါတယ်။
အင်တာနက်အတွင်း Malware အန္တရာယ် မြင့်တက်လာမှု Microsoft သတိပေး
မိုက်ကရိုဆော့ဖ် ကော်ပိုရေးရှင်းသည် ကမ္ဘာတလွှား ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူများအနေနှင့် Malwareများ၏ အန္တရာယ်ကို သတိပြုကြရန် နှိုးဆော်သတိပေးလိုက်သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင် Malwareများ ပြန့်နှံ့လာမှုမှာ အလွန်မြန်ဆန်ပြီး အဖျက်စွမ်းအားမှာလည်း သတိထားရမည့် အနေအထားမျိုးထိ ရှိလာပြီဟု မိုက်ကရိုဆော့ဖ်က ကြေငြာသည်။ သန်းပေါင်းများစွာသော ကွန်ပျူတာများသည် Malwareနှင့် အခြားမလိုလားအပ်သည့် အဖျက် Softwareများ၏ ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ခံနေရကြောင်း မိုက်ကရိုဆော့ဖ်က ဆိုသည်။ Hackerများနှင့် သူတပါး၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ထိုးဖောက်ခိုးယူသူများသည် Virusများထက် Malwareများ ပိုမိုဖန်တီးလာပြီး ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုသူများကို နည်းလမ်းမျိုးစုံနှင့် ထောင်ချောက်ဆင် စွဲဆောင်နေကြပြီး Malwareများ ပမာဏမှာလည်း ယခင်ထက် (၄၃)ရာခိုင်နှုန်းမျှ မြင့်တက်လာကြောင်း မိုက်ကရိုဆော့ဖ်က ပြောဆိုခဲ့သည်။ Malwareများ၏ (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် Application Softwareများကိုလည်းကောင်း၊ (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းသည် Windows OSကိုလည်းကောင်း ဖျက်ဆီးနိုင်သည်ဟု မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏ စာရင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ Malwareများ ပြန့်နှံ့မှုကို နာမည်ကျော် Anti-Virusကုမ္ပဏီကြီးများကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း လျော့နည်းလာပြီဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်စရာ အနေအထား ဖြစ်လာကြောင်း သိရှိရသည်။ Malwareပြဿနာကြောင့် ကွန်ပျူတာများ ခြိမ်းခြောက်ခံရမှုမှာ Virusထက် ဆိုးရွားလာပြီဖြစ်သလို Trojanမျိုးဆက် အဖျက်Virusအချို့မှာလည်း (၂၀၀၈)ခုနှစ်အတွင်း ပိုမိုကြောက်စရာ ကောင်းလာနေကြောင်း မိုက်ကရိုဆော့ဖ်က ပြောဆိုသွားသည်။
အွန်လိုင်း စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများ IDကဒ်များယူဆောင်လာရန်လို
အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်ဖြေဆိုရသော မိုက္ကရိုဆော့ဖ်အပါအ၀င်နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြုအိုင်တီနည်းပညာ စာမေးပွဲများ၀င်ရောက်ဖြေဆိုကြသော ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအနေ ဖြင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင် IDကတ်နှစ်မျိုးယူဆောင်လာရန်လိုအပ်ကြောင်းသိရှိရသည်။ နိုင်ငံတော်နှင့်သက် ဆိုင်ရာဌာန များမှထုတ်ပေးထားသောအသိအမှတ်ပြုကတ်ပြား(၂)မျိုးအားစာမေးပွဲဖြေဆိုရာတွင်ယူဆောင်လာရခြင်းမှာ ဖြေဆိုသူစစ်မှန် ကြောင်းနှင့်ကိုယ်တိုင်ဖြစ် ကြောင်းအတွက်သက်သေ အထောက်အထားများဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။"ပတ်စပို့၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ အွန်လိုင်း စာမေးပွဲဖြေဆိုသူများ ID ကဒ်များယူဆောင်လာရန်လို ကျောင်းသားကတ် စတာတွေထဲက(၂) မျိုးယူဆောင် လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မိုက္ကရိုဆော့ဖ်စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင် မြင်ပြီးသူတွေအနေနဲ့ မိုက္ကရိုဆော့ဖ်က ထုတ်ပေးတဲ့ကတ်ပြားကိုလည်း ID တစ်မျိုး အနေနဲ့ယူလာလို့ရပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်တစ်မျိုးတည်းနဲ့ လာဖြေတဲ့သူတွေကို လက်မခံဘဲ အိမ်ပြန်ယူခိုင်းရတာမျိုးတွေအ ပတ်စဉ်ကြုံတွေ့ ရပါတယ်။ ဒါဟာ နိုင်ငံတကာ အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်း ဖြစ်တဲ့ အတွက်ID ကတ်နှစ်မျိုးမပါလာရင်လုံး၀ စာမေးပွဲဖြေခွင့်မပြုနိုင် ်ပါဘူးвЂќဟုအွန်လိုင်းစာမေးပွဲများ စစ်ဆေးနေသော Myanmar Inspiration မှ တာ၀န်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်
လက်ရှိသုံးစွဲနေသော Internet Explorer ၏ လုံခြုံရေး ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့် security features သစ်များကို မိုက္ကရိုဆော့ဖ်က ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က ပြ သခဲ့သည်။ အဆိုပါ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ feature သစ်များကို မကြာမီ ထုတ်လွှင့်မည့် IE8 browser version သစ်တွင် ထည့်သွင်းသွားမည်ဟု သိရသည်။မိုက္ကရိုဆော့ဖ်မှ IE8 တွင် ထည့်သွင်းမည့် security feature သစ်များ အားလုံး အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားသည်။ ယခင်ကမူ IE တွင် လုံခြုံရေးအား နည်းချက်များ ပါရှိသောကြောင့် မိုက္ကရိုဆော့ဖ်မှာ အမြဲတစေေ၀ ဖန်ခံခဲ့ရပြီး အဓိကပြိုင်ဘက် Mozilla ကို လူသုံးများလာခဲ့သည်။ အသစ်ထုတ်လုပ်မည့် IE8 version သစ်တွင် IE8 user တစ်ဦးမှ ပေးပို့လိုက်သော အချက်အလက်ကို hacker များထံသို့ ရောက်ရှိသွားခြင်းမျိုး မဖြစ်စေရန် security feature သစ် တစ်မျိုးပါရှိမည် ဟု သိရသည်။ reflection attack ဟု လူသိများသော အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုများတွင် browser history နှင့် cookie များကို ဟက်ကာ များက ၀င်ရောက် မွှေနှောက်လေ့ ရှိကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင်အဆို ပါ IE8 version တွင် မိုက္ကရိုဆော့ဖ် ကုမ္ပဏီ အခေါ် Smart Screen Filter ကဲ့သို့သော phishing filter မျိုးလည်း ပိုမိုအသုံး၀င်သော version သစ်အနေဖြင့် ပါ၀င်မည် ဟု သိရသည်။
မိုက္ကရိုဆော့ဖ်မှမကြာမီဖြန့်ချိ တော့မည့်ဆော့ဖ်၀ဲအသစ်တစ်ခုဖြစ်သော Virtual Machine 2008 အတွက်ကျွမ်းကျင်လက်မှတ်ဖြစ်သော MCTS:System Center Virtual Machine Manager 2008 ရရှိနိုင်မည့်စာမေးပွဲအား Beta စာမေးပွဲအဖြစ်အခမဲ့ဖြေဆိုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ вЂњVM Manager 2008 Beta Exam ကိုအောက်တိုဘာ ၂၄ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာဖြေဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိုက္ကရိုဆော့ဖ်ရဲ့ နည်းပညာ သစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ VM 2008 ကိုစိတ်ပါ ၀င်စားသူတွေအနေနဲ့ မည်သူမဆိုဆက်သွယ ်စုံစမ်းမေးမြန်း ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်вЂќဟုအွန် ်လိုင်းစာဖြေဌာနတစ်ခုဖြစ်သော Myanmar Inspirations မှတာ၀န်ရှိသူတစ်ဦးကအင်တာနက်ဂျာနယ်သို့ပြောသည်။ Beta စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်မိုက္ကရိုဆော့ဖ် မှဖိတ်ကြားခြင်းခံရသောသူများအနေဖြင့် Beta Exam Code ယူဆောင်လာရမည်ဖြစ်ပြီး မိုက္ကရိုဆော့ဖ်မှ ဖိတ်ကြားခြင်းမခံရသော သူများလည်း၀င်ရောက်ဖြေဆိုနိုင်ရန်စီစဉ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံသိရှိရသည်။
Ringtone တွေကို အခမဲ့ရယူနိုင်တဲ့ဆိုက်ပါ။ ယခင်က မတွေ့ဘူးသေးတဲ့ ringtone တွေကိုတောင် တွေ့ပြီး ရယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ ဒီဆိုက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ Virus တွေနဲ့ Spyware လို အရာတွေအတွက် စိတ်ချရတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ http://ringtones.msnemotions.org
Notebook ပါရှိလာသူ မည်သူမဆို Capital Hyper Market တွင် Wi-Fi စနစ်ဖြင့် အင်တာနက်ကို အခမဲ့ အသုံးပြုနိုင်ရန် စီစဉ်ပေး ထားကြောင်း သိရသည်။
вЂњHyper Market မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ Taznet အင်တာနက်ကဖေး ကနေ မီတာငါးဆယ် အတွင်းမှာ အင်တာနက် အခမဲ့သုံးနိုင်အောင် Wi-Fi စနစ်ကို ဖွင့်ပေး ထားပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက် ကြည့်တာတို့၊ Gmail, Gtalk အသုံးပြုတာတို့ကို လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခမဲ့ ဖွင့်ပေးထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မသမာတဲ့သူတွေ မသမာတဲ့ နည်းလမ်းတွေ သုံးလို့ မရအောင်တော့ စင်တာကနေ လုံခြုံရေးအရ စောင့်ကြည့်ထားမှာ ဖြစ်ပါတယ်вЂќ ဟု Capital Hyper Market မှ အင်တာနက်နှင့် အိုင်တီ တာ၀န်ရှိသူ ကိုကျော်ဇေထက်က ပြောသည်။
вЂњစင်တာကို Notebook ယူလာတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ Wi-Fi စနစ်နဲ့ အင်တာနက် သုံးမယ်ဆိုရင် Taznet အင်တာနက်ကဖေးရဲ့ Information မှာ လာပြီး အကြောင်းကြား နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာ Wi-Fi စနစ်နဲ့ အင်တာနက် အခမဲ့အသုံးပြုခွင့် ပေးထားတာကို လူသိနည်းပါသေးတယ်вЂќ ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
လက်ရှိအနေဖြင့် စင်တာ၏ သတ်မှတ်ဧရိယာအတွင်း အင်တာနက် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်ရန် Wi-Fi စနစ်ကို ဖွင့်ပေးထားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် Capital Hyper Market တစ်ခုလုံးတွင် ဖွင့်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်းနှင့် Hyper Market ရှိ ဆိုင်ခန်းများ အတွက်ပါ အင်တာနက် ရရှိရန် စီစဉ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။